ဖေ့စ်ဘွတ်(Facebook) ပေါ်က Porn Video ဗိုင်းရပ်စ် အန္တရာယ်. ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ဖေ့စ်ဘွတ်(Facebook) ပေါ်က Porn Video ဗိုင်းရပ်စ် အန္တရာယ်.
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Sunday, January 17, 2016 AndroidFacebook, Knowledge No comments
ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်က ကျနော်တို့ရဲ့ Friend list ထဲက မိတ်ဆွေတွေ ထံကပဲဖြစ်ဖြစ်… ကျနော် တို့နဲ့အတူ facebook groups တွေမှာ members ၀င်ထားတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တဦးဦး ထံကပဲဖြစ်ဖြစ် အမြင် မတော်တဲ့ Porn videos တွေ ကျနော်တို့ရဲ့ facebook timeline ပေါ်မှာ (မရည်ရွယ်ပဲ) အလိုအလျောက် တက်လာနေတာကို သတိထားမိ ကြမှာပါ…
တခါတရံမှာ ကျနော်တို့ အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ… မိသားစုဝင်တွေ ဆီကနေ ဒီလို sex videos လင့်ခ်တွေ ပို့လာတာကို မြင်ရတော့ တအံ့တသြ ဖြစ်ကြ ရမှာပါ…
သူတို့အနေနဲ့ ဒီပို့စ်တွေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ပို့နေတာ မဟုတ်သလို သူတို့ကို အပြစ်တင်လို့လည်း မရပါဘူး… သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတောင် မသိကြပါ.. သနားစရာကောင်းတာကတော့ သူတို့အနေနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံနေရပြီး ဟက်ကာ(Hackers) တွေရဲ့ အသုံးချတာကို ခံနေရတဲ့ သားကောင်းတွေ ဖြစ်နေ ကြလို့ပါ…
ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ အခုနောက်ဆုံးပေါ် Trojan Virus ဟာ browser extensions တွေအဖြစ် တည်ရှိနေပြီး users တွေ စိတ်ဝင်စားအောင် (အတုအယောင်) porn video links ပုံစံတွေနဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ ပြန့်နှံ့နေတာပါ…. ကူးစက်ခံရတဲ့ users တွေရဲ့ account နာမည်တွေကို အသုံးပြုပြီး tags တွေ ပြန်ပွားကာ facebook ပေါ်မှာ ပျံနှံ့နေတာပါ… အထူးသဖြင့် Post approval ကို Tick မလုပ်ထားတဲ့ facebook groups တွေမှာ ပိုပြီးတွေ့နေရပါတယ်…
ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရ ပုံကတော့… ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ခံနေရတဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ဦးဦးထံကနေ porn video လင့်ခ် တခုက timeline မှာ တက်လာတယ် ဆိုပါစို့… အင်တာနက် လုံခြုံရေးကို မသိသေးတဲ့ user တဦးက မစဉ်းစားပဲ လင့်ခ်ကို click လုပ်ပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်… ဒါဆိုရင် porn video ကို ကြည့်ဖို့အတွက် Flash player update လုပ်ရမယ်ဆိုပြီး flash player update ကို link နဲ့တကွ install လုပ်ခိုင်းတဲ့ နေ ရာရောက်သွားပါမယ်… အဲဒီ flash player update ဆိုတဲ့ link ကို install လုပ်လိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဟက်ကာတွေရဲ့ သားကောင် ဖြစ်သွားပါပြီ… သူတို့အလိုကျ အသုံးချတာကို ခံရပါတော့မယ်… Trojan ဗိုင်းရပ်စ်တွေက flash player update အယောင်ဆောင် ထားတာပါ… Flash player update လုပ်ခိုင်းတဲ့ လ့င်ခ်မျိုးမဟုတ်ပဲ အခြား link တမျိုးမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်... အကောင်းဆုံးကတော့ ဘယ်လ့င်ခ်မျိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ် install လုပ်ခိုင်းရင် ဆက်မလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်...
(ကွန်ပြူတာထဲမှာ Flash player update လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ www.adobe.com ဆိုတဲ့ official site ရှိပါတယ်… အဲဒီမှာသာ သွားလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်…)
တကမ္ဘာလုံးမှာ ဖေ့စ်ဘွတ်ကို လူဦးရေ သန်းပေါင်းများစွာနဲ့ချီပြီးတော့ သုံးနေကြတာပါ… ကျနော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် အ၀န်းအ၀ိုင်းလောက်မှာတင် တနေ့တနေ့ တက်လာနေတဲ့ sex video လင့်ခ်တွေက မနည်းပါ… facebook group တွေမှာ member ၀င်ထားတဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ Group admin တွေ ပိုသိကြမှာပါ… ဒါတောင် group အတော်များများမှာ member တွေတင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်တိုင်းကို Admin က ခွင့်ပြုမှ group ပေါ်ရောက်မဲ့ post approval ကို tick လုပ်ထားကြလို့ပါ… နို့မဟုတ်ရင်တော့… တကမ္ဘာလုံးမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Users ဦးရေနဲ့သာ တွက်ကြည့်ပါ… တရက်တရက်ကို pron လင့်ခ်တွေ နည်းမှာ မဟုတ်သလို ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုနှုန်းကလည်း မသေးလှပါ…
လတ်တလော ပေါ်ဖြူလာဖြစ်နေတဲ့ အရာတွေ… ဒါမှမဟုတ်… လူတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရာတွေ… လိုအပ်ချက် တခုအနေနဲ့ မဖြစ်မနေ လုပ်ရမဲ့ အရာတွေကို ဗန်းပြပြီး သူတို့လိုချင်တဲ့ Target ကို ရောက်အောင် သွေးဆောင်ဖြားယောင်တာဟာ ဟက်ကာ (Hackers) တွေရဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် တခုပါ… IT အိုင်တီ နယ်ပယ်မှာဆိုရင်လည်း အိုင်တီကို စပြီးလေ့လာနေတဲ့ လူငယ်တွေဟာ သူတို့အနေနဲ့ ဟက်ကာတွေရဲ့ သားကောင်းဘ၀ ရောက်မှန်းမသိ ရောက်သွားတတ် ကြပါတယ်… လူငယ်တွေ စိတ်ဝင်စားအောင် ဟန်ဆောင် ဖန်တီးထားတဲ့ ဟက်ကာတွေရဲ့ applications တိုင်းကို ကွန်ပြူတာထဲကို Download လုပ် လုပ်ပြီး install လုပ်နေကြလို့ပါ…
(ဟက်ကာတိုင်းကို အဆိုးမမြင်ပါ… အိုင်တီနဲ့ လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံနေတဲ့… အကျိုးပြုနေတဲ့.. (White)ဟက်ကာတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါ… အသိအမှတ်ပြုပါတယ်…)
ဆက်ရအောင်ဗျာ smile emoticon … အင်တာနက် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သုတေသီတစ်ဦးဖြစ်သူ Mohammad Faghani ရဲ့ အဆိုအရ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပုထုဇဉ်တွေ စိတ်ဝင်စားအောင် porn videos တွေလို အယောင်ဆောင်ထားတဲ့ Trojan ဗိုင်းရပ်စ်တွေ စပေါ်လာပြီး ၂ ရက်အတွင်း ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ဦးရေဟာ ၁၁၀,၀၀၀ ကျော် ရှိတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်… ယနေ့အထိလောက်သာ ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားသာ ကြည့်ပေတော့ဗျာ… ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုနှုန်းက ကြောက်ခမန်း လိလိပါ…
ဒီ Trojan ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ဘယ်လောက်ထိ ဆိုးသလဲဆိုရင် ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူရဲ့ account ကို သုံးပြီး porn video လင့်ခ်တွေကို ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ဖြန့်တဲ့အခါ အဆိုပါ ကူးစက်ခံရသူရဲ့ friend list ထဲမှာရှိတဲ့ မိတ်ဆွေ ၂၀ ကျော်လောက်ကိုပါ အလိုအလျောက် tags တွေ လုပ်သွားပါတယ်… အဲဒါကြောင့် porn video တွေ တက်လာတဲ့ ပို့စ်တွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ facebook account နာမည်တွေကို tags လုပ်ထားတာကို ရံဖန်ရံခါ တွေ့ဖူးကြမှာပါ… (ပို့စ်လုပ်တဲ့သူကို ဘာဖြစ်လို့ ငါ့နာမည် tags လုပ်ရတာလဲ ဆိုပြီးတော့ သွားတော့ မဆဲလိုက်ပါနဲ့… သူခမျာ ဘာမှ မသိလိုက်ရှာပါဘူး… smile emoticon smile emoticon …)
Facebook ကို ပထမဦးဆုံး target ထားပြီး တိုက်ခိုက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်က အခု ကျနော်ပြောနေတဲ့ Trojan ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်လောက် မဆိုးပါ… ဖေ့စ်ဘွတ်ထဲက မိတ်ဆွေ ၂ ဦးအကြား spam massage တွေ ပို့တဲ့ အဆင့်လောက်ပဲ ရှိခဲ့တာပါ… နောက်ပြီး webcam ထဲမှာ ဖော်ချွတ်ပုံနဲ့ YouTube ဗွီဒီယိုပုံစံ လုပ်ထားပြီး ပုထုဇဉ်တွေကို ရိုက်စား(scam)လုပ်တဲ့ malware scams တွေလည်း တွေ့ဖူးကြမှာပါ… ဒါမျိုးတွေလောက်ပါ…
ဒါပေမဲ့… အခု trojan ဗိုင်းရပ်စ်က user တယောက်ကို ကူးစက်ပြီးဆိုရင် စောစောက ပြောသလို သူ့ friend list ထဲမှာရှိတဲ့ friends ၂၀ ကျော်လောက်ကို tags တွေ auto လိုက်လုပ်ပစ်လိုက်တာပါ… အယောက် (၁၀၀, ၁၀၀၀, ၁၀၀၀၀, ၁၀၀၀၀၀… etc..) လောက် ကူးစက်ပြီးဆိုရင် သူတို့တွေ ဆက်ပြီး ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ လုပ်သွားမဲ့ tags အရေအတွက်ကိုသာ စဉ်းစား ကြည့်ပါ… ဒီနည်းနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ပိုပြီး ပြန့်နှံ့ လာတာပါ… ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီဆိုရင် ကွန်ပြူတာတွေ၊ အင်တာနက်တွေ သုံးရင် ပုံမှန်မဟုတ် တာတွေ ဖြစ်လာမယ်… အထူးသတိပေးချက်ကတော့ ဒီ trojan ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတဲ့ user ရဲ့ ကွန်ပြူတာ ကီးဘုတ်နဲ့ မောက်စ် လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဟက်ကာ(hackers)တွေက ထိန်ချုပ်ခွင့် ရသွားနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ…
ဖေ့စ်ဘွတ်ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူကတော့ facebook လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ လက်ရှိ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို သူတို့အနေနဲ့ သိရှိထားပြီး facebook အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ လုံခြုံမှုရှိအောင် အဆိုပါလင့်ခ်တွေကို ဟန့်တား တားဆီးဖို့ လုပ်ဆောင်နေတယ်လိုတော့ ပြောထားပါတယ်…
လောလောဆယ် အကြံပြုချင်တာက… ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရတဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ဦးဦးထံက Porn videos လင့်ခ်(Links) တွေ မိမိဖေ့စ်ဘွတ် timeline ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်… မိမိ member ၀င်ထားတဲ့ group ထဲမှာ ပဲဖြစ်ဖြစ်… တွေ့မိရင် အလောတကြီးနဲ့ (Click) မနှိပ်မိပါစေနဲ့… မိမိကိုပါ ကူးစက်သွားမှာ ဖြစ်ပါ တယ်… သေချာတာကတော့ ဒီလိုမျိုး လင့်ခ်တွေ ပို့လာပြီဆိုကတည်းက ဒီမိတ်ဆွေရဲ့ ကွန်ပြူတာဟာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံနေရပြီးဆိုတာ သေချာနေပါပြီ… အဲဒါကြောင့် links တွေပို့လာတဲ့ account ပိုင်ရှင်ကို ၄င်းကွန်းပြူတာမှာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နေကြောင်း အကြောင်းကြားပေးပါ… report လုပ်ပေးပါ… ကွန်ပြူတာကို ဗိုင်းရပ်စ် scan လုပ်ဖို့ အကြံပေးပါ… နီးစပ်ရာ နည်းပညာ နားလည် သူတွေထံမှာ အကြံဥာဏ် ရယူဖို့ တိုက်တွန်းပါ… အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ Trojan ဗိုင်းရပ်စ် (Virus) တွေပါ…
Facebook group ကို open post လုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ group admin တွေကို အကြံပြုချင်ပါတယ်… group setting ထဲမှာသွားပြီး Post approval နေရာမှာ Tick လုပ်ထားပေးပါ… member တွေ တင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်တွေကို တခုချင်း စိစစ်ပြီး group ပေါ် ပြန်တင်ပေးရတဲ့အတွက် နည်းနည်းတော့ အလုပ်ရှုပ်ကောင်း ရှုပ်ပါလိမ့်မယ်… ဒီလို sex links တွေ တက်နေတဲ့ group တွေ page တွေဟာ လူရှိန်တတ်ကြ ပါတယ်... နောက်ပြီး group တခုမှာ အနည်းဆုံး admin ၂ ယောက်လောက်တော့ ရှိသင့်ပါ တယ်ဗျာ… အကြံပေးတာပါ…
ကိုယ်ပိုင်ဖေ့စ်ဘွတ် account သုံးနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ အနေနဲ့လည်း မလိုလားအပ်တဲ့ posts တွေ… မသင့်တော်တဲ့ posts တွေမှာ မိမိ account ကို tags လုပ်လို့ မရအောင်… ဒါမှမဟုတ်… မိမိကို tags လုပ်ထားတဲ့ ပို့စ်တွေကို timeline ပေါ် ရောက်သင့်၊ မရောက်သင့် ပြန်ပြီး Review လုပ်လို့ ရအောင် ဖေ့စ်ဘွတ် ညာဘက်ထောင့် အပေါ်က မျှားနေရာက Setting ကိုသွား… ပြီးရင် Timeline and Tagging Setting နေရာမှာ အောက်ဘက်က “Review tags people add to your own posts before the tags appear on Facebook? နေရာမှာ နှိပ်ပြီး “Review posts friends tag you in before they appear on your timeline” နေရာမှာ Enabled လုပ်ထားလိုက်ပါ… ဒါဆိုရင် ဖေ့စ်ဘွတ်မိတ်ဆွေတွေက မိမိကို tags လုပ်လာရင် သူတို့ posts တွေဟာ မိမိ facebook timeline ပေါ်မရောက်ခင် review လုပ်ပြီး ရှိသင့် မသင့် ကိုယ်တိုင် approve လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်…
နောက်တချက်က မိမိ Member ဝင်ထားတဲ့ group တွေဟာ sex links တွေ အဆက်မပြတ် တက်နေပြီး group admin တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ groups တွေကို ကောင်းကောင်း ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ဘူး ထင်ရင် အကောင်းဆုံးကတော့ မိမိလုံခြုံရေးအတွက် အဲဒီ groups တွေကနေ နုတ်ထွက်လိုက်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်....
တခါတရံ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ကိုယ်တိုင်က ဗိုင်းရပ်စ် သတ်ပေးတဲ့ Virus removal tool တခုအနေနဲ့ ဟန်ဆောင် တတ်ပါတယ်… အင်တာနက် အသုံးပြုသူတွေကို “သင့်ကွန်ပြူတာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံနေရတယ်” virus scan လုပ်ရမယ် ဆိုပြီး ချောက်လှန့်က ဟိုလင်ခ့်ကိုနှိပ်ပါ… ဒီလင့်ခ်ကို နှိပ်ပါဆိုပြီး သူတို့ဆင်ထားတဲ့ ထောင်ချောက်ထဲကို ဆွဲခေါ်သွားတတ်ပါတယ်… ဒါလည်း သတိပြုစေ ချင်ပါတယ် ခင်ဗျား…
-မိမိရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ဦးဦးထံကဖြစ်စေ… အခြားဖေ့စ်ဘွတ်မိတ်ဆွေ တစ်ဦးဦးထံက သံသယဖြစ်စရာ Links တွေ ပို့လာရင် ချက်ခြင်း click မလုပ်ပါနဲ့… ကာယကံရှင်ကို အရင်ဆက်သွယ်ပါ… Report လုပ်ပါ..
-Internet browser တွေမှာ မိမိ မင်္သကာတဲ့… မလိုအပ်တဲ့ browser extensions, facebook extensions တွေနဲ့ applications တွေကို remove လုပ်ပစ်ပါ..
-မိမိမသေချာတဲ့ Dropbox account links တွေကို သေချာစိစစ်ပြီးမှ ၀င်ပါ…
-မိမိမသိတဲ့ ဆိုဒ်တွေကနေ သီချင်း၊ ဗွီဒီယို၊နဲ့ အခြားအရာတွေကို download လုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်ပါ…
-Window OS သုံးနေသူများအနေနဲ့ Window Defender နဲ့ Microsoft Security Essential tool ကို ပုံမှန် update လုပ်ပေးပါ…
-ဖြစ်နိုင်ရင် Kaspersky, Norton စတဲ့ anti-virus tool တွေကို ၀ယ်ယူပြီး ကွန်ပြူတာထဲမှာ install လုပ်ထားပါ…
-Smartphone တွေနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်၊ အင်တာနက် အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်လည်း Lookout, Kaspersky စတဲ့ anti-virus တွေကို ဖုန်းထဲမှာ သွင်းထားသင့်ပါတယ်...
(မသိသေးတဲ့ ဖေ့ဘွတ်မိတ်ဆွေများအတွက် ဦးတည်ရေးသားပါတယ်...)
ဖေ့စ်ဘွတ် ဗိုင်းရပ်စ် အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးကြပါစေ…..။
-------------------------------------- ကိုမျိုး(သုတစွယ်စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
How to CreateaContact Form using HTML5, CSS3 and...
How to embed the contact form in your web pages
ความคืบหน้าแรงงานที่มีวีซ่าครบกำหนด 6ปี ဗီဇာ ၆နှစ်...
Square meter Meter Calculator
"BGF နှင့် DKBA ဗိုလ်နားမကြားအဖွဲ့ ကော့ကရိတ်အနီးကေ...
Software Engineer များ ၊ Software Developer များ သ...
ZYQ i7/Q638 Firmware Update from v002 to v003
ဖုန်း မှာ တကယ့် Calculator အတိုင်းတွက်ချက်နိုင်တဲ့...
Fix Samsung Galaxy S4 GT-I9500 invalid IMEI (Null)...
Sony Ericsson XPERIA Mini Pro SK17i frimware
Windows 10 မှာ ‘Something Happened’ error ကိုအလွယ်...
MTK IMEI TOOL (IMEI ရေးနိုင်တဲ့ Tool)
Samsung Galaxy S5 SC-04F DoCoMo ဖုန်း ဗားရှင်း And...
Honor 4X (UL00) B382 Android 4.4 KitKat Firmware
Honor6(L04) Stock B550 v5.1.1 Lollipop Firmware
Huawei Mobile ဖုန်းမျိုးစုံ ပြုပြင်နည်း (မြန်မာလို...
CPU နည်းပညာနှင့် မျိုးဆက်သစ် ပရိုဆက်ဆာ (ဦးတင်ညွန်...
Learning Guide For 3D Studio Max (မြန်မာလို)
Huawei Flash Tool Firmware all
3350+ English Grammar Practice For Android
Hisense all model firmware ​တွေလိုတဲ့သူ​တွေ​ဒေါင်​...
Downlaod All Lenovo Firmware
Net Guide ( Vol-4, N-19 )
ဖေ့စ်ဘွတ်(Facebook) ပေါ်က Porn Video ဗိုင်းရပ်စ် အန...
နေ့စဉ် ကွန်ပျူတာ သုံးစွဲသူများ သတိပြုရန်....
WAV နဲ့ MP3 file format အကြောင်း တစေ့တစောင်း...
"မြန်မာတို့သိသင့်သော ကမ္ဘာ့အထိမ်းအမှတ်နေ့များ "
Huawei G610S (G610-U00) Official Firmwares
G610-U00 အတွက် Step2Failed အပြင် အခြားသော Error ...
Huawei G610-U00 black screen error solution
huawei lastest firmware
ဖုန်းမှာ မိမိ ပုံကို ပိုလှအောင်ပြင်ပေးနိုင်တဲ့ - F...
WINDOW 10 ကို MAC ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ သုံးချင်ရင် (WIND...
CROSSOVER LINUX V14.1.6 (MULTILANGUAGE)
နန်းမြို့တော် မန္တလေးသို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည် ...
အမေရိကန် ဓာတ်ပုံဆရာ ဒေးဗစ်ဟိသ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ...
“ဘိလပ်မြေနှင့် သံချောင်း တွက်နည်း”
(1) I'D RATHER + (VERB)
I’M NOT USED TO + (V-ING)
I WOULD LIKE TO + (VERB)
လှပတဲ့ Eng စကားလုံးများ
English Speaking Basics (4) အင်္ဂလိပ်စကားပြော အခြေခံ...
English Speaking - Business Expression 12
English Speaking – Business Expressions (13)
English Speaking Basics (1) အင်္ဂလိပ်စကားပြော အခြေခံ...
ဒီပုံစံအတိုင်း ပြောကြမယ်။ Pattern Spectrum
I CAN'T HELP + (VERB-ING)
Belong to နဲ့ belong with .. Taylor Swift နဲ့ ကျနေ...
I WANT YOU TO + (VERB)
Photo Blender v1.0.0APK
တောင်ကိုးရီးယားလူမျိုးတွေဟာ ထမင်းစားရင် ဘာလို့ ထမ...
" ရှမ်းလူမျိုးများ အကြောင်း "
"ဗုဒ္ဓလက်ထက် အရှင်လတ်လတ် မြေမျိုခံခဲ့ရသူ (၅)ဦး
Sony Xperia M dual 15.5.A.0.18 Flash File Firmware...
Galaxy A3 SM-A300F Android 5.0.2 Root လုပ်နည်း
Full Screen Caller ID PRO v11.2.4 Apk
Xiaomi Mi Phones များအတွက် MIUI 7.1 Stable ROM တင်...
GOOGLE ACCOUNT ကျသွားတဲ့ ERROR ကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့...
ဖုန်းအတော်များများကို Root ဖောက်နိုင်တဲ့ Fastest O...
ကိုယ့်ဖုန်းမှာ Video,MP3 တွေကိုဒေါင်းယူနိုင်မည့် V...
Facebook Messenger APK 52.0.0.19.66.APK
Asus Zenfone zoom ZX551ML Stock Rom
In time = အချိန်မီ။ On time = အချိန်မှန်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်မယ့် ထူးခြား ဖြစ်စဉ်မျာ:
Samsung Android များ၏ သင်မသိသေးသော အချက်များ
Telenor ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေတော့ သိထားသင့်တယ...
♪ မိမိပုံကိုရုပ်ပြောင်ပန်းချီဖန်တီးပေးမယ့် - Caric...
ALL IN ONE .NET FRAMEWORK [2016 UPDATE]
Shareek (2015) DVD 500 MB
DETECTIVE BYOMKESH BAKSHY 2015 DVD 700 MB
Photo Slideshow Creator 4.31 Full Keygen
ConvertXtoDVD6Full Crack
Kath from Surrey English Conversation
How to Save Money: Strategies for Saving in Canada...